Shirkadda Golis oo qalab caafimaad ku wareejisay ardayda Jaamacadda Bariga Africa | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo qalab caafimaad ku wareejisay ardayda Jaamacadda Bariga Africa
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa qalab caafimaad oo loogu talagalay inay ardadu ku sameeyaan practical-ka ku wareejisay jaamacadda Bariga Africa si uu wax badan oo la xiriira waxbarashadooda ugu fududeeyo.
Qalabkan oo ka koobnaa 3 model (Qalfoof) oo ka turjumaya qofka banii’aadamka xubnihiisa oo dhamaystiran ayaa waxaa lagu wareejiyay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Africa.
Hormuudka kuliyadda Caafimaadka jaamacadda Bariga Africa Dr Abshir oo ka hadlay madashii ay ku gudoomeen qalabka caafimaad ayaa uga mahadceliyay shirkadda Golis qalabkan ay ardada u keeneen isagoo xusay in Golis aysan ku cusbayn inay caawiso bahda waxbarashada balse ay mar walba ugu hiiliso horumarinta waxbarashadooda.
Jaamac Xasan Barre oo kasocday waaxda Suuqgaynta iyo xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis (MPR) ayaa dhankiisa xusay in qalabkan uu qayb ka yahay dadaalka ay shirkaddu ugu jirto in ardayda Soomaaliyeed ay helaan jawi waxbarasho oo ku haboon waxa ay baranayaan si ula mid noqdaan ardayda dhiggooda ah ee caalamka intiisa kale wax ka barata.
Si kastaba ha ahaatee qalabka ay shirkadda Golis ku wareejisay ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Africa ayaa ka anfacaya ardayda inay si la taaban karo u darsaan guud ahaan xubnaha qofka banii’aadamka ah iyagoo qalabkan kahor, aragti un u bartay.